Greta Thunberg: "Ny fahavalontsika lehibe dia fizika." | Option UK
Greta Thunberg Ny fahavalontsika lehibe dia fizika.
by Sonja 21. Septambra 2019, 18: 10 2.7k Views
Taorian'ny dia tapa-bolana nandehanan'i Atlantika ho any Etazonia tamin'ny sambo, Greta Thunberg dia nanao ny kabary andrasana tsara tao amin'ny Kongresy.
“I Etazonia no mpitrandraka karbônina lehibe indrindra amin'ny tantara. Izy io koa no mpamokatra solika voalohany eran-tany. Ary na izany aza, ianao ihany no firenena eo amin'izao tontolo izao izay nanao sonia ny tanjonao mafy hialana amin'ny fifanarahana Paris. Satria ny fanamarihana hoe "dia ratsy ho an'ny Etazonia izany", hoy i Greta Thunberg.
“Ny krizy sy ny krizy ekolojika dia mihoatra ny politika ao amin'ny antoko. Ary ny fahavalontsika amin'izao fotoana izao dia tsy mpanohitra politika eto amintsika. Ny fahavalontsika ankehitriny dia ny fizika. Ary tsy afaka manao “fifampiraharahana” amin'ny fizika isika. ”
Ity ny kabariny:
Antso Mifohaza ao amin'ny Kongresy ny Greta Thunberg - Exclusive | NowThis
Eksodosy: Greta Thunberg dia nanaitra ity antso fifohazana mampientam-po ity tamin'ny Kongresy, nandrisika ireo mpitondra mba hikarakara an'io krizy io toy ny zava-misy ankehitriny. '
Previous lahatsoratra Andro manadio tontolo izao 2019 tamin'ny 21st septambra
Next lahatsoratra Te hidina hidrogen avy amin'ireo havaozina azo alaina ny milina Scottish Gin
Te hidina hidrogen avy amin'ireo havaozina azo alaina ny milina Scottish Gin